စစ်မှန်သောပျော်ရွင်ခြင်း – အရိုးမား မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ
13Mar 2013 22 Aug 2018
မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က သူကြည့်ဖူးသော Happiness ဟု အမည်ရသည့် documentary ရုပ်ရှင် ကားတစ်ခုအကြောင်းပြောပြဖူးသည်။ ထို ရုပ်ရှင်ထဲ၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပျော်ရွှင်ဆုံး တိုင်းပြည် (သို့) လူမျိုးသည် ဒိန်းမတ်လူနိုင်ငံ နှင့် လူမျိူးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည် ဟု ဆိုသည်။ မိတ်ဆွေ၏ ပြောပြချက် အရ ဒိန်းမတ် လူမျိုးများသည် အသိုင်းနှင့် အဝိုင်းနှင့် နေရခြင်းကို အလေးဂရု ထားကြောင်း၊ ဤအချက်သည် ဒိန်းမတ် လူမျိုးများကို အပျော်ရွှင် ဆုံးလူသားများအဖြစ် သတ်မှတ်ရာတွင် အရေးပါသည့် အချက်များစွာ ထဲမှ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆက်လက်၍ ဂျပန် လူမျိုးများသည် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသက် အရှည်ဆုံးသော လူမျိုးဖြစ်သော်လည်း အထက်ပါ documentary ရုပ်ရှင်ကားထဲတွင် ပျော်ရွှင်မှု အနည်းဆုံးသော လူမျိုး များထဲတွင် ပါဝင်ကြောင်း တင်ပြထားသည် ဟု ဆိုသည်။ ထိုအခါ မိမိကိုယ်တိုင် ကလည်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဆယ်နှစ်ခန့် သွားလာ၊ နေထိုင်အလုပ်လုပ် ကိုင်ခဲ့ ဖူးသဖြင့် ထိုမိတ်ဆွေပြောသော ပျော်ရွှင်မှု အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားလာသည်။ အင်တာနက် ထဲတွင် ပျော်ရွှင်မှု နှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်းပါး၊ အဆိုအမိန့် များ ကို ရှာဖွေလေ့လာကြည့်မိသည်။ လူတွေက ပျော်ရွှင်မှု ကို ဘယ်လို ချိန်ပြီး မည်သည့် ပေတံဖြင့် တိုင်းတာကြသည် ကို စိတ်ဝင်စားလာသည်။
Forbes မဂ္ဂဇင်း website တွင် ပျော်ရွှင် မှုကို တိုင်းတာရာတွင် အချက် ၂၀ ခန့်ကို ဖော်ပြထားသည်။ မှတ်သားစရာ ကောင်းလှသည်။ ထိုအချက် အားလုံးထဲတွင် အချို့သော အချက် များသည် ရိုးစင်း လှသော်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသည်။ ဥပမာ – တေးသီချင်းများကို များများနားထောင်ခြင်း၊ အားရပါးရ ရယ်မောခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ယောက် အတွက် ကောင်းသော အရာ တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အရာရာကို အကောင်းမြင်ဝါဒ ဖြင့်သုံးသတ်ခြင်း၊ အသစ်အသစ်သော အရာများကို သင်ကြားခြင်း ရှာဖွေခြင်း စူးစမ်းခြင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ အတိတ်က ဇတ်လမ်းများကို တစ်ယောက်ယောက် အားပြောပြခြင်း စသည်တို့ သည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပေ သည်။ ထို့အပြင် ပျော်ရွှင်သောသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရန် ငွေရေးကြေးရေးသည် အဓိက အရေးကြီးဆုံးသော အရာ မဟုတ်ဟု လည်းအဆိုပါ website တွင်ဖော်ပြထားသည်။ တဆက်တည်း အထက်ပါ အချက်များကို အနီးဆုံး၊ အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်နာနိုင်သော ကျင့်သုံးနိုင်သော မိတ်ဆွေ ဘယ်သူများရှိမလဲ ဟု စိတ်ထဲတွင် ရှာဖွေ ကြည့်သည်။ သို့သော် ထိုသူများသည် အပျော်ရွှင် ဆုံး လူသားများဖြစ်မည်ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောလာလျှင် အလွယ်တကူ လက်ခံရန်ခက်ခဲသည် ကိုလည်း သတိထားမိသည်။ သို့ဆိုလျှင် ပျော်ရွှင်ခြင်း ကို ကျမ်းစာထဲတွင် မည်သို့ ဖော်ပြသနည်း? ဘုရားသခင်က မည်သို့သော သူများကို ပျော်ရွှင်သော သူများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသနည်း?
တရားဟောဆရာ Steve Shepherd ၏တရားဒေသနာ တစ်ခုတွင် ပျော်ရွှင်ခြင်းဟူသည် လောက အတွက်မဟုတ်၊ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသည် ဤလောကတွင် ခရီးသွား အာဂန္တု များသာဖြစ်သဖြင့် (၁ပေ ၂း၁၁) စစ်မှန်သော၊ ထာဝရတည်တံ့သော ပျော်ရွှင်ခြင်း ကို ဤလောကတွင် သက်ရှင် လှုပ်ရှား သွားလာစဉ်တွင် မရရှိ နိုင်ပေ။ တဒင်္ဂပျော်ရွှင်ခြင်း များသာဖြစ်သည်။ ထို တဒင်္ဂ အတွင်းသာ ရရှိခံစားရသော ပျော်ရွှင်ခြင်း ကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့ အငမ်းမရ ရှာဖွေ ခံစားနေကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထို တဒင်္ဂပျော်ရွှင်ခြင်းသည် တနေ့သော အချိန် တွင် ရရှိမည့် ထာဝရ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် မည်သို့မျှ နှိုင်းယှဉ် ၍မရပါ ဟု ပြောသည်။
အထက်က Forbes website တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များ အားလုံး ကို လိုက်နာနိုင်ပါစေ၊ ကမ္ဘာတွင် အချမ်းသာ ဆုံးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ၊ သားသမီး မြေးမြစ် များစွာ ရရှိသူ ပင်ဖြစ် နေပါစေ..အောင်မြင်ကြော်ကြားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ၊ လောကတွင် လိုချင်တာ အားလုံးကို ရရှိနိုင်သော လိုတရ လူသား တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါစေ ရရှိသော ပျော်ရွှင်ခြင်းသည် တဒင်္ဂသာဖြစ်သည်။ ထိုလောက ကောင်းကြီး အားလုံးသည် မိတ်ဆွေကို ထာဝရ တည်မြဲသော ပျော်ရွှင်ခြင်းကို မပေးနိုင်ပါ။ သို့သော် စစ်မှန်သော၊ ဘုရားပေးသော ပျော်ရွှင်ခြင်း ကို ခံစားရရှိ နိုင်ရန် ကျွန်တော်တို့၏ နေ့စဉ် အသက်တာကို အောက်ပါ အချက်များအတိုင်း လိုက်လျှောက် သင့်ပေသည်။
၁။ ကျွန်တော်တို့၏ တော်ခြင်း၊ တတ်ခြင်း များထက် ကျေးဇူးတော်ကို အလေးပေးခြင်း
၂။ ကျွန်တော် တို့၏ တန်ဖိုးထက် ဘုရားသခင် လုပ်ပေးသည့် အရာများအပေါ် အလေးပေးခြင်း
၃။ လောကီရေးရာများထက် ဝိညာဉ်ရေးရာ ကိုအလေးပေးခြင်း
“ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလို အလျာက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် သနားတော်မူရာ ဖြစ်သတည်း။ ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိ” ဧဖက် ၂း ၈-၉ တွင်
တရံရော အခါ လူတစ်ယောက် သေ သဖြင့် သူ၏ ဝိညာဉ်သည် နိဗ္ဗန်ဝင်သော တံခါးရှေ့ သို့ရောက်လာသည်ဟု ဆိုသည်။ ထုံးစံအတိုင်း နိဗ္ဗန် တံခါးစောင့် စိန့်ပီတာ က ထိုသူအား နိဗ္ဗန်အတွင်း ဝင်ခွင့် ပေးသင့် မပေးသင့် စစ်ဆေး မေးမြန်းသည်။
စိန့်ပီတာ။ ။ မိတ်ဆွေ လောကထဲ အသက်ရှင်တုန်း ပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုပြောပါ… ကျွန်တော် အမှတ်ပေးမယ်.. အဲ. . . အမှတ် ၁၀၀ ရတာနဲ့ မိတ်ဆွေ အတွက် နိဗ္ဗန် တံခါးကို ဖွင့်ပေးမယ်…။
လူသား။ ။ ဟုတ်ကဲ့ . . . ကျွန်တော် တစ်ကြိမ် တစ်ခါဘဲ အိမ်ထောင်ကျ ပြီး နှစ် ၅၀ တိုင်တိုင် ကျွန်တော့် အိမ်ထောင် မြဲမြံ ပါတယ်။
စိန့်ပီတာ။ ။ ဟုတ်လား. . . ကောင်းတယ် ၁ မှတ်
လူသား။ ။ ၁ မှတ်ထဲဘဲလား… အိုကေ… ကျွန်တော် တစ်သက်လုံး တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဘုရားကျောင်း မှန်မှန်သွားပြီး အလှူငွေလည်း မှန်မှန်ပေးပါတယ်။
စိန့်ပီတာ။ ။ အို…ဟုတ်လား….တော်လိုက်တာ ၁ မှတ်
လူသား။ ။ ဟင်. . . ၁ မှတ်ထဲလား. . . ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် ဆင်းရဲသားတွေကို အမြဲတမ်း အကူအညီပေးပါတယ်။ Homeless တွေကိုလည်း အမြဲတမ်း ကူညီပါတယ်။
စိန့်ပီတာ။ ။ အင်း ကောင်းတယ်… အဲဒါလည်း ၂ မှတ်ပေးမယ်။
လူသား။ ။ ခင်ဗျား… ၂ မှတ်ဟုတ်လား? ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တော့ သွားပါပြီ ငရဲ ကိုဘဲ သွားရတော့ မယ်ထင်တယ်။ ဘုရားသခင်က ကျေးဇူးတော်သက်သက် နဲ့ ကျွန်တော့ကို ဝင်ခွင့် မပေးဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့ မှာ နိဗ္ဗန် ဝင်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အရည်အချင်း မရှိတော့ပါဘူး..
စိန့်ပီတာ။ ။ ၁၀၀ မှတ်၊ မိတ်ဆွေ အမှတ် ၁၀၀ ကျော် ရပါပြီ ဒါကြောင့် အခုတံခါးဖွင့် ပေးပါ့မယ်
သည် ပုံဥပမာလေး က တကဲ့အဖြစ်အပျက် တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အတွက် ခံယူစရာ ကောင်းတဲ့ သင်ခန်းစာ ကောင်း တစ်ခုကိုပေးပါတယ်။ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်က “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေဟာ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်မှောက် ဝင်ဖို့ အတွက် မလုံလောက်ပါ” လို့ ရေးသား ဖူးပါတယ်။ မိတ်ဆွေ…. လောကကြီးမှာ ကောင်းတဲ့ အရာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ ဖူးသလဲ… ပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ… ဘုရားကျောင်းမှန်မှန်သွားသလား? အလှူမှန်မှန်ပေးသလား? ဆင်းရဲသား အယောက် ၁၀၀ ခန့်ကို ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ဖူးသလား? ငတ်ပြတ်နေတဲ့ homeless အယောက် ၁၀၀၀ လောက်ကို အပတ်တိုင်း ထမင်းကျွေးဖူး သလား? အဲ လူသန်းပေါင်းများစွာ အတွက် မိမိ ရဲ့ အသက် ကို အသေခံဖူးသလား… မိတ်ဆွေ အဲဒီလောက် ကောင်းတဲ့ အမှုတွေ ကို လုပ်ခဲ့ဖူး ရင်တောင်မှ မိတ်ဆွေ ရဲ့ ကောင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်မှောက် ကိုရောက်ဖို့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။
လူတော်တော် များများက ကျေးဇူးတော် (Grace) အကြောင်းကို နားမလည်ကြဘူး. . . ကျေးဇူးတော် ကို ပေါ့ပေါ့ကလေး၊ ပါးပါးကလေး သာမန် အနေနဲ့ တွက်ချက်၊ ခံယူတတ်ကြတယ်။ ကိုယ့်ကို ပြစ်မှား၊ စော်ကား၊ လှောင်ပြောင် သရော် တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ခွင့်လွှတ်ရုံ မက ထိုသူအတွက် အသက်ပေးဖို့ ဆိုဒါ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ သခင်ယေရှု ဟာ သူ့ကို ပြစ်မှား၊ စော်ကား၊ လှောင်ပြောင် သရော်တဲ့ လူ တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘဲ၊ လူသားအားလုံး ကို ခွင့်လွှတ်ရုံ မက သူ့ရဲ့ အသက်ကိုပါ စတေးခံခဲ့တယ်။ လူသားအားလုံး ဟာ ကျေးဇူးတော် သက်သက်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ကိုရတယ်။ ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ ကျေးဇူးတော်လည်း? ဒါထက် ကြီးမားတဲ့ အရာရှိနိုင်ပါ့မလား? သည့်ကနေ့ ကျေးဇူးတော် အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရင် မလွယ် လွန်းဘူးလား ဆိုတဲ့သူ များ ဟာ ကျေးဇူးတော် ရဲ့ ကြီးမားမှု၊ နက်နဲ သိမ်မွေ့ မှုတွေကို နားမလည်၊ မစဉ်းစားတတ် သောကြောင့် သာဖြစ်တယ်။ —>စာမျက်နှာ ၂ သို့
Tags: ကယ်တင်ခြင်း, မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ, Thawngno
Previous Rev. Dr. Yam Kho Pau at CBC
Next ပင်လယ်နီကိုဖြတ်သန်းခြင်း (Rev. Dr. James Sing Za Khai)
Categories Select Category 4. SALVATION AND EVANGELICAL 6. CHRISTIAN RELATED ARTICLES 7. HOLY SPIRIT 8. GENERAL 9. RELIGIONS OF THE WORLD ကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ခရစ္စမတ် ခရစ်ယာန်ဆောင်းပါးများ ခရစ်ယာန်ဗဟုသုတ ခရစ်ယာန်အသက်တာ ခရစ်ယာန်အသက်တာ – ဗီဒီယို စာအုပ် ဆုတောင်းခြင်း တရားဒေသနာ (ဗီဒီယို) ဗီဒီယို သက်သေခံချက် သက်သေခံချက်များ သမိုင်း သမ္မာကျမ်းစာမှပုဂ္ဂိုလ်များ သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားခြင်း Bishop Mawia CALVARY BURMESE CHURCH Caroline Mawia CBC Christian Life Christmas Church History Dr. Anna May Say Pa Dr. Cherry Waing Dr. Khin Kyu Kyu Easter Encouragement when sorrow Maung Zalatt Phyu Men Fellowship Musics Myanmar Christian Pries Be Bin Htoo Prof. Kathy Lone Resurrection Rev. Do Pi Rev. Dr. Maung Maung Htwe Rev. Dr. Simon Pau K. En Rev. Dr. Simon Pau Khan En Rev. Dr. Zaw Lay (Cin Za Mang) Rev. Kip Thian Pau Rev. Lian Khan Kap Rev. Philips Ahone Rev. Saw David Lah Rev. Saw Ler Htoo Rev. Zaw Hla Than (Jimmy) Rev. Zaw Thu Lin Rev. Zaw Win s/m Awi Khawm Huai s/m Hkawn Ja Nahpaw s/m Marlene AhMu Po s/m Naomi Kam (Ngiakpui) Saya Ba Taung Tin Saya Naga Kyaw Naing Saya Saw Gye Htoo Saya Thang Vella Thanks giving Thawngno Uncategorized
Archives Select Month April 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 November 2014 October 2014 September 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010